सदस्य हुन्छु भन्दापनि सदस्यता नदिने कांग्रेस, क्रियाशील सदस्यतामा जुँगाको लडाई – KhojPatrika
सदस्य हुन्छु भन्दापनि सदस्यता नदिने कांग्रेस, क्रियाशील सदस्यतामा जुँगाको लडाई
पार्टीमा कब्जा जमाउने स्वार्थमा नेताहरु
खोज पत्रिका सोमवार, २०७८ असार २१, १७ :३७ बजे
काठमाडौं । महाधिवेशन हुन दुई महिना पनि बाँकी छैन । तर, नेपाली काँग्रेस क्रियाशील सदस्यता विवाद मै अल्झिरहेको छ । अचम्मको कुरो, पार्टीमा आबद्धता जनाउन चाहने कार्यकर्ताको चाहना गुटगत स्वार्थका कारण छानबिन प्रक्रियासम्म पुगेको छ । कति नेताले त क्रियाशील सदस्यको कोटा समेत पाएका छन् । संसारमा कुनै दलभित्र नहुने सदस्यता विवाद नेपालमा मात्र हुने गर्छ । नेपाली कांग्रेसको आसन्न १४ औं महाधिवेशनका प्रारम्भिक मतदाता हुन्, क्रियाशील सदस्य । तर, भागवण्डाको राजनितिले कहिल्यै मुक्त बन्न नसकेको कांग्रेसको महाधिबेसन यही झगडाले प्रभावित हुने अवस्थामा पुगेको छ । जसरी भएपनि दलमा पडक जमाउने स्वार्थका कारणमा गुटमा बाँडिएका नेताहरु पार्टीमा विरोधि पक्षधरका क्रियाशील सदस्यको संख्या कम गराउन चाहन्छन् ।
कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि चुन्ने क्रियाशील सदस्यले हुन् । तल्लो तहमा नै विपक्षीलाई रोक्न सकेको खण्डमा पार्टीमा कब्जा जमाउन सक्ने स्वार्थ कै कारण यो विवादलाई नेताहरुले मलजल गरि रहेका छन् । महाधिवेशन आयोजनाको कार्यतालिका अनुसार असार २० गते अर्थात आइतबार क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले विवाद टुंग्याएर सूची केन्द्रीय समितिलाई बुझाइ सक्नु पर्ने थियो । तर, छानबिन समितिले अहिलेसम्म ३० जिल्लाको मात्र विवाद समाधान गर्न सकेको छ । बाँकी ४७ जिल्लाको बिवादका कारण महाधिवेशन नै प्रभावित बन्न सक्ने सम्भावना पनि छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरुले यो बिवादलाई किनारा लगाउन नसकेपछि २०७७ फागुन ६ गतेको केन्द्रिय समितिको बैठकले रमेश लेखकको संयोजकत्वमा क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति नै बनायो । समितिमा केन्द्रीय सदस्यहरु आनन्द ढुंगाना, प्रदीप पौडेल, श्याम घिमिरे, जीवन परियार, कल्याण गुरुङ र योगेन्द्र चौधरी सदस्य छन् । लेखक सभापति शेरबहादुर देउवा निकट हुन् । छानबिन समितिले गौशालास्थित सुविधा सम्पन्न आलिशान बंगलामा बसेर देशभरको विवाद टुंग्याउन खोज्दै छ ।
१० लाख सक्रिय सदस्य बनाउने लक्ष्य लिएको कांग्रेसको यो विवाद सुल्झाउन समितिले झन्डै आधा करोड खर्च पनि गरी सकेको छ । तर, नतिजा अहिले पनि शुन्य नै छ । कांग्रेसमा आबद्ध हुन चाहने कार्यकर्तालाई किन रोकिँदै छ ? दलका टाउकेहरुको लडाइँमा कार्यकर्ता नै किन बलिका बोका बनाइन्छन् ? भन्ने प्रश्न कार्यकर्ताले गरिरहेका छन् । क्रियाशील सदस्यको मनोनयनमा नेता अनुकुलको छनोट भएको आरोप बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको छ । त्यो पक्षले सभापति शेरबहादुर देउवाको एकलौटी सिफारिसमा सदस्यता बाँडिएको हुँदा निष्पक्ष छानविनका लागि दबाब दिँदै आएको छ । नेता अनुकलको कार्यकर्ता बन्न नसक्ने कांग्रेसमा सधैँ बिभाजनको शिकार बन्दै आउनु परेको छ । यस्ता उदाहरण कांग्रेसमा निकै छन् ।
क्रियाशील सदस्यले नेता निर्वाचित गर्ने हुँदा आफ्नो पक्षलाई बलियो बनाउन क्रियाशील सदस्यता वितरणलाई हतियार बनाउने गरिन्छ । अनि त्यही हतियारले हजारौँ कार्यकर्ताको मनोबल रेटिन्छ । किन सधै देखिन्छ कांग्रेसमा यस्ता कचिंगल ? संवैधानिक बाध्यताकाकारण भदौ भित्रै जसरी भए पनि १४ औं महाधिवेशन गर्नुपर्ने कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिलाई सदस्यता जस्तो सामान्य विवादले तताई रहेको छ । यसले कांग्रेसमा गुटगत स्वार्थ कतिसम्म मौल्याएको छ भन्ने पनि प्रष्ट पार्छ । यो विवाद अझै तन्किने हो भने नेपाली कांग्रेसको वैधानिकता माथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । उता मुलुक संघीयतामा गइसकेपनि अहिलेसम्म कांग्रेस संघीय संरचनामा जान सकेको छैन । यसले कांग्रेसका नेताहरु संगठन प्रति कति अनुत्तरदायि छन् भन्ने पनि प्रष्ट हुन्छ । कांग्रेसमा सधैँ देखिने साना मसिना विवादलाई हेर्दा भन्न सकिन्छ, कहिँ नभएको जात्रा हाडीँ गाउँमा भनेजस्तै भएको छ ।
ट्याग : #नेपाली काँग्रेस क्रियाशील सदस्यता, #महाधिवेशन